Tsara kokoa noho ny manenina! Ny Semalt Expert dia mampitandrina amin'ny tranganà herisetra ara-bola mahatsiravina amin'ny 2017
Ny aretina ara-bola no fitaovana ampiasaina matetika amin'ny fitaovan'ny cybercriminal. Tsy sarotra ny mahatakatra hoe nahoana no mitadidy izany fa ny ankamaroan'ireny mpanao heloka bevava ireny no vola lehibe indrindra mahatonga ny asa an-keriny. Vokatr'izany, ireo rafitra ara-bola dia miatrika ny loza ateraky ny aterineto amin'ny sehatra maro. Ny ratsy malemy ara-bola dia mikendry ny fotodrafitrasa ao amin'ny orinasa (toy ny server sy ny terminal terminal), mpanjifa, ary ny mpiara-miasa.
Na dia nihamafy aza ny ady nandritra ny roa taona teo ho eo na dia teo aza ireo ady an-tsokosoko dia nisy ny andian-jiolahim-boto nipoitra, ny sehatra ara-bola dia mbola mijaly noho ny fisondrotry ny asan'ny TRI ary ny fiparitahan'ny aretina.
Max Bell, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia manoritsoritra ny loza ratsy indrindra ara-bola indrindra amin'ny 2017 mba hahafahanao mitoetra ho voaro.
1. Zeosy (Zbot) sy ny variants azy
Nahitana an'i Zeus tamin'ny 2007 ny Zeus ary iray amin'ireo malware malaza indrindra eran-tany. Tamin'ny voalohany, i Zeus dia nampiasaina hanome ny jiolahy amin'ny zavatra rehetra nilain'izy ireo hangalatra vola sy vola amin'ny banky kaonty.
Io trojan io sy ny variants azy dia manangona fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny keylogging ary mametraka fehezan-dalàna fanampiny amin'ny banky tsy misy fetra. Ny Zeus dia miparitaka amin'ny alàlan'ny fanentanana fisintonana sy fampielezan-tserasera. Ny malware malaza indrindra amin'ny fianakavian'i Zeus dia ahitana an'i Atmos sy Floki Bot.
Neverquest no niseho voalohany tamin'ny taona 2013 ary hatramin'izao fotoana izao dia nahitana fanavaozam-baovao sy fanavaozana maro. Natao hampiroborobo ny fampahalalam-baovao avy amin'ny traikefa izy ireo rehefa nitsidika tambajotram-banky, tambajotra sosialy, ecommerce, ary tranonkala vavahady. Ity trangan-kolotoraly ara-bola ity dia nahazo ny alàlan'ny kitapo ampiasain'ny Neutrino izay nahatonga ireo mpamono hanisy endri-javatra sy tolotra ho an'ny toerana voatokana, raha toa ka tsy hita intsony.
Tamin'ny taona 2014, mpanao heloka bevava enina no voampanga ho nanakorontana ny fiampangana an'i Neverquest mba hangalatra mpampiasa StubHub 1.6 tapitrisa $.
Avy amin'ny tantaran'ity malware ity, dia avoakany amin'ny alàlan'ny kitapo ampiasain'ny Netrino ary koa amin'ny alàlan'ny fanentanana phishing..
3. Gozi (fantatra koa amin'ny hoe Ursnif)
Ity dia iray amin'ireo tranainy indrindra trondro banky mbola velona. Izany no ohatra tsara indrindra amin'ny trojan iray izay nanely ny famoretana tamin'ny fampiharana ny lalàna.
Fantatra tamin'ny taona 2007 i Gozi, ary na dia ny sasany amin'ireo mpamorona azy aza dia nosamborina ary namoaka indroa ny fehezan-dalàna avy ao aminy, nandroaka ny tafio-drivotra izy ary nanohy nampirotsaka ny lohan'ny orinasam-bola ara-bola.
Vao haingana, i Gozi dia novolavolaina tamin'ny tolo-kevitra mivoatra amin'ny fivoahana ny sandboxes sy ny fialàna amin'ny fiarovan'ny biometrika. Ny trojan dia afaka manonona ny haingam-pihetsehan'ireo mpampiasa sy manosika ny mpihaino azy rehefa mametraka ny angon-dry zareo amin'ny sehatra. Fandefasana mailaka an-tsokosoko manokana, toy ny rohy maloto, no nampiasaina mba hizarana an'i Gozi tamin'ny nakana ny tra-boina tamin'ny tranonkala WordPress.
Ny endriny voalohany amin'ny Dridex teo amin'ny sehatra dia tamin'ny taona 2014. Fantatra fa mandeha amin'ny mailaka mailaka navoaka indrindra tamin'ny botcre Necurs. Ny manam-pahaizana momba ny fiarovana an-tserasera dia nanombana fa hatramin'ny taona 2015, ny isan'ny mailaky ny spam izay mitsidika ny aterineto isan'andro ary ny fidiran'i Dridex dia nahatratra ny tapitrisa.
Ny Dridex dia miankina amin'ny fanafihana lalindalina izay natao handefa ireo mpampiasa any amin'ny tranonkalan'ny banky. Amin'ny 2017, toa sahala amin'ny hoe nahazo fanatsarana ny malware amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta toy ny AtomBombing. Mampidi-doza izany fa tsy tianao ny tsy hiraharaha raha mandamina ny fiarovana ny aterineto ianao.
Ity trojan ity dia zanaka lahin'ny zanakao amin'ny fehezan-teny famandrihana Zeus 2011. Na dia teo aza ny zava-nisy tamin'ny taona 2010, dia nahatonga azy ireo tsy ho kankana fotsiny ho an'ny iray amin'ireo malaza ratsy malaza indrindra amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny angona angon-drakitra fanampiny izay nahitan'ireo mpamorona azy tao amin'ny code Zeus.
Na dia nopotehin'ny fitaovam-piarovana aza i Ramnit tamin'ny taona 2015, dia hita fa misy ny fiovana lehibe amin'ny taona 2016 sy 2017. Misy porofo hoe miverina izy io ary mitombo.
Ny fomba nentim-paharazana nampiely ny Ramnit dia tamin'ny alalan'ny kitapo malaza. Ireo tra-boina dia voan'ny aretina maloto sy ny fiara-mandeha amin'ny finday.
Ireo no fototry ny olana ara-bola ao an-tampony, saingy mbola misy olon-kafa ihany no maneho ny firoboroboana goavana amin'ny hetsika trojan. Mba hitazonana ireo tambajotra sy orinasa azo antoka ho an'ireo malaso sy ireo malware hafa, tehirizo ny tenanao amin'ny fampiasana ireo fandrahonana mahatsiravina amin'ny fotoana rehetra Source .